Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » IFraport AG ibeka ngempumelelo inqaku lesithembiso
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
IFraport AG ibeka ngempumelelo inqaku lesithembiso.
Umba wenqaku lesithembiso namhlanje unyusa isixa semali esitsha esinyuswe yiFraport AG ngo-2021 ukuya kuthi ga kwi-2.9 yezigidigidi. Yiyo loo nto iQela ngoku linesixa esimalunga ne-4.5 yeebhiliyoni zeerandi kwingxowa mali yokuhlawula amatyala kunye neendlela zokuthenga ngetyala ezikhuselekileyo nezingasetyenziswanga.
Inikezelwa iminyaka emihlanu kunye nesixhenxe nesiqingatha seminyaka, inqaku lakhutshwa ngeziqwengana ezine.
Ngenxa yesidingo esomeleleyo, ivolumu yokukhutshwa iyonke yaphakanyiswa ngokuphawulekayo ukusuka kumthamo owawucingelwa kuqala we-200 yezigidi.
AbakwaLandesbank Hessen-Thüringen kunye ne-UniCredit Bank AG basebenze njengabaququzeleli abadibeneyo kwimicimbi yemali mboleko yeFraport.
IFraport AG ibeke ngempumelelo inqaku lesithembiso elixabisa i-500 yezigidi zeerandi namhlanje (ngo-Okthobha 21). Inikezelwa iminyaka emihlanu kunye nesixhenxe nesiqingatha seminyaka, inqaku lakhutshwa ngeziqwengana ezine. Ngenxa yeemfuno ezinamandla ezivela kubatyali mali baseJamani nabamazwe aphesheya, ivolumu yokukhutshwa iyonke iphakanyisiwe ngokuphawulekayo ukusuka kumthamo owawucingelwa kuqala we-200 yezigidi. Umcimbi wenziwe kwisiphelo esisezantsi sokusasazeka kwexabiso.
IFraport AGIlungu lebhodi yesigqeba yezezimali nolawulo (CFO), uNjingalwazi uGqirha Matthias Zieschang, uthe: “Siyavuya kakhulu yimfuno ephezulu kakhulu evela kubatyali zimali yokufumana izithembiso zethu. Le yenye yeevoti ezicacileyo zokuzithemba kwiqela leFraport. Ngapha koko, iyangqina ukuba sisendleleni elungileyo. Enkosi kulawulo lwethu lokungabinamali, siphumelele incopho yesifo secoronavirus - kwaye sizokwazi ukwenza notyalo mali oluyimfuneko kwixesha elizayo. ”
Umba wenqaku lokuthembisa wanamhlanje unyusa isixa semali esitsha esonyuswe ngu IFraport AG ngo-2021 ukuya phantse kwi-2.9 yezigidigidi. Yiyo loo nto iQela ngoku linesixa esimalunga ne-4.5 yeebhiliyoni zeerandi kwingxowa mali yamatyala kunye neendlela zokuthenga ngetyala ezikhuselekileyo nezingasetyenziswanga.
Umhlaba webhanki Hessen-Thüringen kunye ne-UniCredit Bank AG isebenze njengomcwangcisi odibeneyo wokukhokelela kwimali mboleko yenqaku likaFraport.